Xawaaladaha Soomaalida ee Mareykanka oo xirmay & walaac laga muujiyey – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Xawaaladaha Soomaalida ee Mareykanka oo xirmay & walaac laga muujiyey
A warsame 7 February 2015
Mareeg.com: Dalka Maraykanka waxa dhamaaday wakhtigii kama damabysta ahaa ee uu bangi Maraykan ah u qabtay in uu ku xirayo xawaaladaha Soomaalida ee ka hawlgala dalkaasi Maraykanka.
Bangigan oo la yiraahdo, Merchant ayaa waxa uu gacanta ku hayey boqolkiiba 80 xisaabaadka xawaaladaha Soomaalida.
Xawaaladaha intooda badan ayaa haatan joojiyey adeegyaddii ay bixinayeen ee ay u qabanayeen bulshada Soomaaliyeed ee USA.
Bangiga ayaa sheegay in uu ka cabsi qabo in uu hoggaasami waayo shuruucda lacagta ee dalka Maraykanka, waxa uuna sheegayaa in xawaaladaha soomalida aanay awoodin ay cadeeyaan halka ay ku dambeeyaan lacagaha ay xawilaan.
Hasayeeshee xawaaladaha Soomalida ayaa sheegaya in ay u hoggaansamayaan shuruucdan.
Dowladda Soomaaliya, dadka Soomaalida iyo hay’ado u dooda xuquuqdaq Aadanaha ayaa walaac ka muujiyey go’aanka lagu joojiyey Koontooyinka xawaalada Soomaalida.
Mid ka mid ah xubnaha golaha wasiirada cusub oo is casilay (Sababta)
Dagaal ka dhacay Baledweyne & maamulka oo yiri “Lama horjoogsan karo horumarka”